I-Dendrology: kuyini, izici, ukubaluleka kanye nezifundo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isayensi izama ukutadisha konke okwenzeka emhlabeni wethu esikhathini esedlule nesedlule nokubikezela ikusasa. Elinye legatsha lesayensi elicwaninga ngezihlahla liyi I-Dendrology. Igatsha elicwaninga ngezihlahla nokukhula kwazo, likhiqiza izindandatho.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi nge-Dendrology, izici zayo nokubaluleka kwayo.
1 Yini i-Dendrology
2 I-Dendrology isetshenziswe kwisimo sezulu
3 Ukuguquka kwesimo sezulu namasongo esihlahla
Sikhuluma ngamagama "Dendron" nelithi "Logos", anemvelaphi yamaGrikhi, okusho isihlahla nokutadisha ngokulandelana. Leli gama lenziwa ngo-1668 ngu-Ulisse Aldrovandi (umsunguli we-natualist wase-Italy we-Botanical Garden of Bologna) ngokushicilelwa kwe-Dendrology. Njengoba isihlahla sikhula sakha izindandatho ezintsha. La masongo asetshenziselwa ukukhomba iminyaka yokukhula, iminyaka, ukuma, njll. Ngakho-ke, uma sifunda kahle izindandatho zesihlahla, singakwazi kahle ukuthi kwenzekeni esikhathini esedlule.
Ngenxa ye-Dendrology, izinqubo ze-geological zingafundwa ngamasongo ezihlahla. I-geology yomhlaba iyashintsha ngokuhamba kwesikhathi idale ama-geological agents angaphandle. Amanzi nomoya, imvula, njll. Bangama-ejenti e-geological ahlukile asebenza ngokumodela indawo. Izakhi ze-Geological ezifana namatshe nokwakheka kwazo kuyashintshwa ngokuhamba kwesikhathi. Ngenxa yamasongo okukhula kwezihlahla nokutadisha kwawo, kungenzeka ukwazi ukuthi kwenzekeni esikhathini esedlule. Ukutadisha izinqubo zokwakheka komhlaba ngamasongo ezihlahla kuyigatsha le-Dendrology elaziwa ngeDendrogeomorphology.
Kungumthombo wedatha obaluleke ngokwedlulele wezifundo zendawo, zasedolobheni, zengqalasizinda noma zokuphathwa kwemvelo. Kumele sazi ukuthi kulo lonke lolu hlobo lwezenzo zabantu kuyadingeka ukwazi indawo esikuyo nokuvela kwayo. Ngamanye amagama, ngentuthuko ezindaweni ezisemadolobheni noma kungqalasizinda kungathakazelisa ukwazi ukuvela kwendawo lapho izokwakhiwa khona. Okufanayo kwenzeka ngezinhlobo zezitshalo nezilwane ezikhona kule ndawo efanayo. Iqoqo lazo zonke izifundo ezidingekayo ukuze zikwazi ukwenza ukwakhiwa ngokusho kwezenzo zomthetho laziwa njengokuhlolwa komthelela wezemvelo. I-Dendrology inendawo impela kulezi zifundo ezinomthelela kwezemvelo.
I-Dendrology isetshenziswe kwisimo sezulu
Siyazi ukuthi ulwazi olumayelana nezinguquko ku-geology lwendawo alutholakali nje kuphela emasongweni okwakhiwa kwezihlahla, kodwa futhi nasesimo sezulu. Yize cishe sonke sazi ukuthi ngokubala izindandatho zezihlahla singazi iminyaka yazo, iqiniso ukuthi akulona iqiniso ngokuphelele. Isihlahla ngasinye sinohlobo lokukhula olwehlukile kunesinye futhi kuya ngohlobo ngalunye. Akuzona zonke izihlahla ezakha izindandatho ezifanayo ezikhula ngendlela efanayo. Ngalesi sizathu, ukwakheka kwala masongo nakho kungasinika imininingwane ngesimo sezulu esasikhona ngaleso sikhathi lapho isihlahla esithile sesithuthukile.
Amasongo amnyama akha ngesikhathi sasebusika. Kungumuthi ojiyile futhi ohlangene osiza isihlahla ukuzivikela emazingeni okushisa aphansi. Izitshalo kufanele zisinde ezimweni ezinzima zemvelo ebusika nasehlobo. Lezi zivame ukuba yizinkathi ezimbili zonyaka izimo zezimo zazo ezeqise kakhulu futhi, ngakho-ke, zidinga ukudala izindlela zokuzivikela.
Enye yazo ngokhuni olujiyile olubonakala emasongweni amnyama. Ngale ndlela, amasongo alula akhiqizwa ehlobo ngokhuni oluncane kakhulu namasongo amnyama ngokhuni oluhlangene kakhulu. Amasongo acacile abanzi, ngoba isihlahla sijabulela amazinga okushisa amahle nezakhamzimba. Ngale ndlela, inomsebenzi wezitshalo ophakeme kune Ikuvumela ukuthi unwebise izindandatho isikhathi eside.
Kwezinye izikhathi singathola izindandatho ezicacile ezincanyana kakhulu. Lokhu kungaba wuphawu lwesomiso somlando. Njengoba singenawo amanzi, isihlahla asikwazi ukukhula. Ngale ndlela, siyabona ukuthi indandatho yokukhula incane impela kepha icacile. Lokhu akudalulwa izinhlobo ezahlukahlukene zolwazi. Ngakolunye uhlangothi, iqiniso lokuthi iringi icacile alivezi ukuthi kube namazinga okushisa aphezulu aqhubekayo. Ngakolunye uhlangothi, siyabona ukuthi ngokungakhuli nokuba mncane ngokuqhathaniswa namanye amasongo acace banzi, kukhombisa ukuthi isihlahla asiwathokozelanga umsoco.
Ngokuvamile Ukuba khona kwamasongo amancane noma abanzi kukhombisa inani lezakhamzimba ezitholakala phakathi. Uma sinesihlahla esinamasongo amnyama kakhulu, akhombisa ubusika obude nobunzima. Ngakolunye uhlangothi, amasongo acacile nawo ahlaziywa ngobubanzi bawo. Ngale ndlela, singazi ukuthi ngabe ihlobo selide kakhulu noma lincane noma ngabe babenamazinga okushisa aphezulu noma aphansi.
Ukuguquka kwesimo sezulu namasongo esihlahla
Ukuguquka kwesimo sezulu akufundiswa kuphela ngokwanda kwamagesi abamba ukushisa kanye nokushintsha kwezinga lokushisa ezingeni lomhlaba jikelele. Ingabuye ifundwe ngama-bioindicators aziwa njengezindandatho zezihlahla. I-Dendrology ibhekele ukutadisha izihlahla zezinsalela ezihlinzeka ngolwazi ngesimo sezulu sezikhathi ezedlule. Kule nkambu siyazi ukuthi yaziwa njenge-dendroclimatology.
Kumele sikhumbule ukuthi ukutadisha ngokushintsha kwesimo sezulu kubalulekile ekuphathweni kwemithombo yemvelo namuhla nakusasa. Asikwazi ukuhlela ukuthi yimiphi imisebenzi yethu yezomnotho esikhathini esizayo ngokususelwa ekutadisheni kwamanje. Kuyadingeka ukwazi ukuguquguquka okuhlukile kwesimo sezulu okuye kwaba nawo kuwo wonke umlando weplanethi. Lokhu kushintshashintsha kungaziwa kahle ngenxa yeDendrology. Izindandatho zezihlahla zingasinika imininingwane eminingi hhayi kuphela ngamazinga okushisa nokukhula kwesihlahla, kepha futhi mayelana ukuvela kwamazinga okushisa nezimo zemvelo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi nge-Dendrology, ukubaluleka kwayo kanye nemininingwane engasivezela yona.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » I-Dendrology